Mendri-pitokisana ve ny Fivavahana eo Amin’ny Resaka Ady?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Garifuna Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Macua Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mixe (Afovoany) Mizo Mooré Myama Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norvezianina Nzema Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Uruund Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Miaramila nandritra ny folo taona latsaka kely i Solo. Hoy izy: “Nitso-drano anay ny momperanay hoe: ‘Homba anareo anie Andriamanitra!’ Lasa saina aho hoe: ‘Izaho ity handeha hamono olona, nefa ny Baiboly milaza fa tsy azo atao izany.’ ”
Tao amin’ny tafika an-dranomasina i Robert nandritra ny Ady Lehibe II. Hoy izy tamin’ny pasiterany: “Tonga etỳ ambony sambo ianao hangata-pitahiana ho anay, mba hahazoanay fandresena. Tsy izany koa ve no ataon’ny fahavalo?” Namaly izy hoe: “Tsy takatry ny saina ny fomba fiasan’ny Tompo.”
Tsy mahafa-po anao angamba ilay valin-teny. Tsy ianao irery no toy izany.
Nilaza i Jesosy fa anisan’ny didin’Andriamanitra lehibe indrindra ny hoe: “Tiavo ny namanao tahaka ny tenanao.” (Marka 12:31) Miankina amin’ny fiavian’ilay olona ve no tokony hitiavana azy na tsia? Tsy izany mihitsy! Hoy i Jesosy tamin’ny mpianany: “Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo.” (Jaona 13:34, 35) Tena hiavaka ny fifankatiavan’izy ireo ka izany no hahafantarana azy. Aleony mamoy ny ainy ho an’ny namany toy izay hamono olona.
Nankatò an’ireo tenin’i Jesosy ireo ny Kristianina voalohany. Hoy Ny Rakipahalalana Momba ny Fivavahana (anglisy): “Nilaza ny rain’ny eglizy fahiny, toa an’i Tertullien sy Origène, fa tsy nahazo namono olona ny Kristianina, ka tsy niditra tao amin’ny tafika romanina.”
AHOANA NY AMIN’NY VAVOLOMBELON’I JEHOVAH?
Efa ho ny firenena rehetra no misy Vavolombelon’i Jehovah. Matetika àry no samy ahitana azy any amin’ny firenena mifanandrina amin’ny ady. Miezaka mafy anefa izy ireo mba haneho an’ilay toetra ahafantarana ny Kristianina, dia ny fitiavana.
Mampianatra ny olona hifankatia ve ny mpitondra fivavahana?
Tsy niandany tamin’iza na iza, ohatra, ny Vavolombelon’i Jehovah tany Rwanda tamin’ny 1994, rehefa niady ny Hutu sy Tutsi. Nanao vivery ny ainy ny Vavolombelona hutu mba hanafenana Vavolombelona tutsi. Hoy ny milisy hutu, rehefa nahatratra Vavolombelona hutu nanafina ny namany: “Tsy maintsy maty ialahy isany fa nanampy Tutsi handositra.” Mampalahelo fa novonoiny tokoa izy roa lahy.—Jaona 15:13.
Ahoana ny hevitrao? Mifanaraka amin’ny tenin’i Jesosy momba ny fitiavana ve izany ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah izany?
Hizara Hizara Ny Fivavahana sy ny Resaka Ady